Data Center hihena
Cabinet ivelan'ny trano hihena
Telecom Site hihena
Industrial automatique hihena
Energy Storage hihena
AC Powered ivelan'ny trano ao amin'ny governemanta hihena Sprint (US)
ny mpitantana ny 18-10-24
XRow hihena vahaolana amin'ny iray amin'ireo mpanome tolotra aterineto lehibe indrindra ny tahirin-kevitra foibe (Shina)
ny fanaovana fampiharana: Ny mpampiasa dia iray amin'ireo mpanome tolotra aterineto lehibe indrindra ao Shina, izay nalaza noho ny tolotra aterineto samihafa. Tsy nanana antontan-kevitra mpivady eo Shina foibe manohana ny angon-drakitra goavana fifamoivoizana. Envicool lasa lehibe mpamatsy vahaolana hihena hatramin'ny 2013 noho ny angon-drakitra foibe amin'ny ...
CYBERMATE CRAC AT CHINE UNICOM NY FANAZAVANA CENTRE (Shina)
ny fanaovana fampiharana: Yizhuang IDC, iray amin'ireo 5-kintana IDC angona foibe nanana ny China Unicom, dia angon-drakitra mpitarika foibe niorina tany Beijing Shina. Ity tahirin-kevitra foibe no nanoratra fanazavana manan-danja maro ny China Unicom fifamoivoizana. Envicool nanome 62 vondrona ny 100kW CyberMate CRAC rafitra ho an'ny angon-drakitra izany foiben'ny tamin'ny 2013 ...
DC Powered ivelan'ny trano ao amin'ny governemanta hihena Ooredoo (Iraka)